भारतमा देखिएको निपाह भाइरस संक्रामक बन्दै
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। भारतका केहि स्थानमा निपा (निपाह) भाइरसको संक्रमण देखिन थालेसँगै नेपालमा पनि पूर्व तयारी थालिएको छ । यस भाइरसको संक्रमणका कारण गत साता भारतमा एक बालकको ज्यान गएको थियो ।***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
नेपालमा जोखिम कति ? तुलनात्मक रुपमा कुनै रोग भारतमा फैलन सुरु भए पश्चात नै नेपालमा त्यो रोगको जोखिम रहेको बताइन्छ । पछिल्लो साता भारतमा निपाह भाइरसको संक्रमण फैंलदै जान थालेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसको जोखिमबारे सचेत गराएको हो । स्वाथ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले यो भाइरस अहिलेसम्म नेपालमा देखा नपरेको भए पनि सतर्कता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।